Meelaha ugu wanaagsan ee lagu ordo adduunka iyo taariikhda | Fardaha Noti
Meelaha ugu wanaagsan ee lagu ordo taariikhda
Carlos Garrido | | Tartanka fardaha
Tartanka farduhu waa mid dhaqso u socda. Daawasho nadiif ah dhinac walba, oo kicisa shucuurta isla markaana qabta qof kasta oo go'aansada inuu markhaati ka noqdo. Tani waxay noqon kartaa sababta ugu weyn ee noocan ah dhacdooyinka ay ugu kaceen caan tan iyo markii la aasaasay sanado badan ka hor. Si kastaba ha noqotee, sidaan soo sheegnay, waa riwaayad lafteeda, bandhig walbana wuxuu leeyahay jilayaal waaweyn oo muhiim ah oo aan laga maarmin. Xaaladdan oo kale way iska caddahay cidda ay yihiin, ka dibna waxaan kuu soo bandhigi doonnaa adiga meelaha ugu wanaagsan ee lagu tartamo taariikhda.
Xaqiiqdii qaar ka mid ah fardaha aan sheegi doonno way garanayaan iyaga xitaa waxay ogaan doonaan qayb badan oo noloshooda ah maadaama qaarkood ay noqdeen jilayaal ku habboon.
1 Farta Lap
Waxaa la dhihi karaa waxaan wajaheynaa mid ka mid ah fardaha ugu caansan, kaliya ma ahan dhanka tartanka, laakiin dhan walba. Waa xayawaan ka mid ah wakiilka ugu badan ee Australia iyo New ZealandXaqiiqdii, maydkiisa ayaa loo qaybiyay sidii bandhigyo seddex ka mid ah matxafyada ugu muhiimsan labada dal.
Waxay ugu yeedheen "Casaan weyn", magac tilmaamaya tayadiisa jir ahaaneed ee xoogga leh: adkeysi, xoog, dherer weyn iyo xawaare shaydaan. Waxaas oo dhan waxay ku darsadeen jaakadeeda xabadka. Run ahaantii, tiradeeda ayaa soo rogtay.
Isbarbaryaac ahaan, kulankiisii ​​ugu horreeyay ee darawalnimada tartanka ma ahayn sida ugu wanaagsan ee suurtagal ah, maxaa yeelay isagu wuxuu ugu hooseeyay tartankii ugu horreeyay ee uu ka qeybgalay. Laakiin sida odhaahda loo yidhi, "ma aha sida ay ku bilaabato, ee waa sida ay ku dhammaato." Ka dib bilow aan aad u fiicnayn, qaab ciyaareedkiisu si aad ah ayuu u fiicnaaday, illaa heer guule gabi ahaanba wax walba labaataneeyada soo daahay.
Muhiimaddiisu waxay ahayd inay tahay inay marto xitaa isku day dil oo ay geystaan ​​dad ku dhow khamaarka. Dhamaadka sheekadiisa ayaa timid 5-tii Abriil 1932-dii markii uu si xoogaa u dhintey markii uu ka qeyb galayey tartamada qaaradda Mareykanka. Inbadan waxay rumeysnaayeen in dhimashadiisa ay sababtay a sumayn.
Marka laga hadlayo fardaha isboortiga ee Mareykanka, magaca John Henry had iyo jeer wuxuu soo baxaa muuqaalka, waa wadatameeye calaamadeeyay casri mahadcelintiisa guulaha muhiimka ah ee sideetamaadkii.
Dhamaan guulaha uu gaadhay, waxaa lagama maarmaan ah in la muujiyo guusha abaalmarinta sida Faraskii Sannadkii 1981 iyo 1985, iyo shantii jeer ee uu awooday inuu ku dhawaaqo inuu yahay Horyaal Sare ee Mareykanka. Wuxuu ku guuleystay 39 guul oo ka mid ah 83-dii uu ciyaaray, wax micnaheedu ahaa qaddar badan iyo faa'iidooyin maaliyadeed oo deeqsi ah.
Hawlgabnimadiisu waxay timid Juun 21, 1985, oo ay sababtay dhaawac weyn oo foos ah mid ka mid ah jilibyadiisa taas oo ka hor istaagtay inuu sii wado waxqabadka heerkii looga baahnaa faraska astaamahiisa.
Cayaaraha ma fududa. Nasiibku had iyo jeer adiga kuguma fiicna oo waxaa jira waqtiyo aad ugu sarreyso meesha ugu sarreysa, xirfaddaada ayaa gaabinaysa nasiib darro dhab ah. Tani waxay ahayd xaaladda Bárbaro, oo ah mid ka mid ah dareenka ugu weyn ee taraafikada Mareykanka ee bilowga 2000s.
Ka dib markii uu ku guuleystay horyaalka Kentucky Derby 2006, wuxuu ku sii jeeday 'Preakness Stakes' isagoo raadinaya ballaarinta rikoorkiisa. Laakiin sharaf ka fog, waxa uu helay waxay ahayd jab culus oo ka soo gaadhay lugta midig oo ka hor istaagtay inuu ka qayb galo. Goor dambe, wuxuu ku qasbay inuu maro qalliin dhowr ah si looga fogaado qaddarka sugaya dhammaan fardaha la ildaran dhaawaca noocan ah: dhimashada allabariga. Nasiib darrose, waxqabadyadu ma guuleysan mana gaarin hadafkii weynaa, iyo maalmo kadib waxay ahayd in loo huro ka dhan ah doonista badan.
Musiibo dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah fardihii ugu rajada badnaa waqtigaas, oo aan saqafku ka jirin.
Xoghayntu waxay ka mid ahayd fardaha calaamadeeyay hor iyo gadaal. Horeba bilawgeeda, taas oo ku guuleystay 7 ka mid ah 9-kii tartan taas oo uu ku tartamay iyo waxaa loo magacaabay Faraska Sanadka, waxay u qortay mid ka hor xoolo gaar ah oo gaar ah.
Horumarkiisu wuxuu ahaa mid waxashnimo ah, iyo 1973 waxaa loogu dhawaaqay inuu ku guuleystay Triple Crown ee Mareykanka, xaqiiqo taariikhi ah maadaama wax intaa ka badan oo aan 25 sano ka yareyn laga soo gudbay tan iyo markii ugu dambeysay ee noocan oo kale ah la dhammaystiro. Weli rikoodh kale oo uu awood u lahaa inuu jebiyo ayaa ka dhacay Belmont, halkaas oo uu galka u geeyay biyaha lix ka mid ah sagaal dhacdo oo uu ka qayb qaatay. Dhamaadka isla sanadkaas wuxuu ka fariistay inuu noqdo xero xero.
Xamaasad ahaan, waxaan muujineynaa laba xaqiiqo oo ku saabsan Xoghaynta. Midka koobaad ayaa ah maxaa yeelay lahaa qalbi laba jibbaaran inta faras caadi ah, taasoo ka dhigtay wax lala yaabo. Midda kale ayaa ah in loo doortay mid ka mid ah cayaartoyda ugu fiican Ameerika., kujira lambarka 35 ee liiska.
Kuwani waa, fekerkeenna, meelaha ugu wanaagsan ee lagu tartamo taariikhda. Iyaga waxaan ku dari karnaa magacyada kuwa kale oo badan oo iyaguna door muhiim ah qaatay, sida Dhagaxyada Smarty o Dagaal Admiral.
Intee in le'eg ayuu faras socon karaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Fardo Noti » Anshaxa » Tartanka fardaha » Meelaha ugu wanaagsan ee lagu ordo taariikhda
Marengo, faraskii Napoleon